မက်ဒရစ်မြို့ခံနှစ်သင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားများ
အက်သလက်တီကိုနဲ့ ရီးယဲလ်နှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားများ
14 Aug 2018 . 5:54 PM
စပိန်ဘောလုံးလောကမှာ El Clasico ပြီးရင် ပြိုင်ဆိုင်မှုအပြင်းထန်ဆုံးက ရီးယဲလ်နဲ့ အက်သလက်တီကို တို့ရဲ့ မက်ဒရစ်ဒါဘီပွဲပါ။ နှစ်သင်းစလုံးက ကွင်းတွင်းကွင်းပြင်မှာ တစ်သင်းကို တစ်သင်း နှာတစ်ဖျားသာအောင် ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပြီး အဲဒီပြိုင်ဆိုင်မှုရဲ့ အကျိုးဆက်က ဒီနှစ်သင်းမှာ ကစားတဲ့ ကစားသမားတွေအပေါ်မှာလည်း ရိုက်ခတ်မှုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်ကနေ အက်သလက်တီကိုကို ပြောင်းတဲ့ ကစားသမားဆိုရင် အက်သလက်တီကို ပရိသတ်တွေက ရန်သူတစ်ယောက်လို သဘောထားပြီး ရီးယဲလ်ပရိသတ်တွေကလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ။
အခု အက်သလက်တီကိုအသင်းရဲ့ ဂိုးသမားဟောင်း ကော်တိုအာ Courtois ရီးယဲလ်အသင်းကို ရောက်ရှိချိန်မှာတော့ အက်သလက်တီကို ပရိသတ်တွေက ကော်တိုအာကို ဒေါသပေါက်ကွဲနေကြပါပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘောလုံးလောကမှာ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေက သိပ်တော့ မဆန်းပါဘူး။ အရင်တုန်းကဆိုရင်လည်း မက်ဒရစ်မြို့ခံနှစ်သင်းမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေက အဲဒီလို လှောင်ပြောင်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မက်ဒရစ်မြို့ခံနှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေထဲက ပရိသတ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ကစားသမားတွေကို အမှတ်ရနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . .
လူးဝစ်အာရာဂိုးနက်စ် Luis Aragonés
စပိန်အသင်းအတွက် ယူရို-၂၀၀၈ ဆုဖလားရယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ ဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး အာရာဂိုးနက်စ်ကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိဦးမှာပါ။ သူဟာ ဘောလုံးသမားဘ၀တုန်းက ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ၁၉၅၈ ကနေ ၁၉၆၀ အထိကစားခဲ့ပေမယ့် Official တစ်ပွဲမှ ကစားခွင့်မရခဲ့ဘဲ ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှာ အက်သလက်တီကို အသင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်။ အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ (၁၀)နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီး ဂန္ထ၀င်ကစားသမားအဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဘန်ရှူးစတား Bernd Schuster
ရီးယဲလ်အသင်းကနေ အက်သလက်တီကိုအသင်းဆီ တိုက်ရိုက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲမှာ ဘန်ရှူးစတားလည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါ။ ရီးယဲလ်အသင်းမှာ ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၀၊ အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ ၁၉၉၀ ကနေ ၁၉၉၃ အထိ ကစားခဲ့ပြီး ထိုက်သင့်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ဟူဂိုဆန်းချက်ဇ် Hugo Sánchez
မက္ကဆီကို ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဟူဂိုးဆန်းချက်ဇ်ကတော့ အက်သလက်တီကိုအသင်းကနေ ရီးယဲလ်အသင်းကို တိုက်ရိုက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာပါ။ ဟူဂိုဆန်းချက်ဇ်ဟာ အက်သလက်တီကိုအသင်းမှာ ၁၉၈၁ ကနေ ၁၉၈၅ ခုနှစ်အထိ ကစားခဲ့သလို ရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ၁၉၈၅ ကနေ ၁၉၉၂ ခုနှစ်အထိကစားခဲ့ပြီး နှစ်သင်းစလုံးမှာ အောင်မြင်မှုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်တိုက်စစ်မှူးကြီး ရာအူးလ်ကလည်း သူတို့ရဲ့မြို့ခံပြိုင်ဘက်အသင်း လူငယ်အကယ်ဒမီကနေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးပါပဲ။ ၁၉၉၂ မှာ ရီးယဲလ်အသင်းအကယ်ဒမီကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီကနေ စီနီယာကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
ရီးယက်စ် José Antonio Reyes
ရီးယက်စ်က ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ အာဆင်နယ်ကနေ ရီးယဲလ်အသင်းကို အငှားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီရာသီကုန်မှာပဲ အက်သလက်တီကိုအသင်းဆီ ရောက်ခဲ့တာပါ။ အက်သလက်တီကို ကစားသမားဘ၀ (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ယူရိုပါလိဂ်(၂)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၄)ခုအထိ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
မိုရာတာကလည်း ရာအူးလ်လိုပါပဲ။ အက်သလက်တီကို အကယ်ဒမီမှာ ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိကစားခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ရီးယဲလ်အကယ်ဒမီကို ရောက်ရှိခဲ့တယ်။ မိုရာတာရဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀က မတည်ငြိမ်ခဲ့ဘူး။ စီနီယာအသင်းမှာ ၂၀၁၀ က ၂၀၁၄ ၊ ပြီးတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်၊ ၂၀၁၆ မှာ ရီးယဲလ်ဆီ ပြန်ရောက်၊ တစ်ရာသီအကြာမှာပဲ ချယ်လ်ဆီးကို ရောက်ရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကစားသမားတွေက မက်ဒရစ်မြို့ခံနှစ်သင်းစလုံးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေထဲက နာမည်ကျော်တွေကို ရွေးထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း ကိုယ်သိတဲ့ ကစားသမားနာမည်တွေကို ပြောခဲ့ပေးပါလား . . . . .
အကျသလကျတီကိုနဲ့ ရီးယဲလျနှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားမြား
စပိနျဘောလုံးလောကမှာ El Clasico ပွီးရငျ ပွိုငျဆိုငျမှုအပွငျးထနျဆုံးက ရီးယဲလျနဲ့ အကျသလကျတီကို တို့ရဲ့ မကျဒရဈဒါဘီပှဲပါ။ နှဈသငျးစလုံးက ကှငျးတှငျးကှငျးပွငျမှာ တဈသငျးကို တဈသငျး နှာတဈဖြားသာအောငျ ကွိုးစားနကွေတာဖွဈပွီး အဲဒီပွိုငျဆိုငျမှုရဲ့ အကြိုးဆကျက ဒီနှဈသငျးမှာ ကစားတဲ့ ကစားသမားတှအေပျေါမှာလညျး ရိုကျခတျမှုရှိနတောဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျကနေ အကျသလကျတီကိုကို ပွောငျးတဲ့ ကစားသမားဆိုရငျ အကျသလကျတီကို ပရိသတျတှကေ ရနျသူတဈယောကျလို သဘောထားပွီး ရီးယဲလျပရိသတျတှကေလညျး အဲဒီအတိုငျးပါပဲ။
အခု အကျသလကျတီကိုအသငျးရဲ့ ဂိုးသမားဟောငျး ကျောတိုအာ Courtois ရီးယဲလျအသငျးကို ရောကျရှိခြိနျမှာတော့ အကျသလကျတီကို ပရိသတျတှကေ ကျောတိုအာကို ဒေါသပေါကျကှဲနကွေပါပွီ။ ဒါပမေဲ့လညျး ဘောလုံးလောကမှာ ဒီလိုဖွဈရပျတှကေ သိပျတော့ မဆနျးပါဘူး။ အရငျတုနျးကဆိုရငျလညျး မကျဒရဈမွို့ခံနှဈသငျးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ နာမညျကြျောကစားသမားတှကေ အဲဒီလို လှောငျပွောငျမှုတှနေဲ့ ရငျဆိုငျခဲ့ရတာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မကျဒရဈမွို့ခံနှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့ဖူးတဲ့သူတှထေဲက ပရိသတျနဲ့ ရငျးနှီးပွီးသား ကစားသမားတှကေို အမှတျရနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . .
လူးဝဈအာရာဂိုးနကျဈ Luis Aragonés
စပိနျအသငျးအတှကျ ယူရို-၂၀၀၈ ဆုဖလားရယူခဲ့ပွီး ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ ကှယျလှနျခဲ့တဲ့ ဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး အာရာဂိုးနကျဈကို ပရိသတျတှေ မှတျမိဦးမှာပါ။ သူဟာ ဘောလုံးသမားဘဝတုနျးက ရီးယဲလျအသငျးမှာ ၁၉၅၈ ကနေ ၁၉၆၀ အထိကစားခဲ့ပမေယျ့ Official တဈပှဲမှ ကစားခှငျ့မရခဲ့ဘဲ ၁၉၆၄ ခုနှဈမှာ အကျသလကျတီကို အသငျးဆီ ပွောငျးရှခေဲ့တယျ။ အကျသလကျတီကိုအသငျးမှာ (၁၀)နှဈကွာကစားခဲ့ပွီး ဂန်ထဝငျကစားသမားအဖွဈလညျး မှတျတမျးဝငျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဘနျရှူးစတား Bernd Schuster
ရီးယဲလျအသငျးကနေ အကျသလကျတီကိုအသငျးဆီ တိုကျရိုကျပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ ကစားသမားတှထေဲမှာ ဘနျရှူးစတားလညျး တဈဦးအပါအဝငျပါ။ ရီးယဲလျအသငျးမှာ ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၀၊ အကျသလကျတီကိုအသငျးမှာ ၁၉၉၀ ကနေ ၁၉၉၃ အထိ ကစားခဲ့ပွီး ထိုကျသငျ့တဲ့အောငျမွငျမှုတှေ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ဟူဂိုဆနျးခကျြဇျ Hugo Sánchez
မက်ကဆီကို ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး ဟူဂိုးဆနျးခကျြဇျကတော့ အကျသလကျတီကိုအသငျးကနေ ရီးယဲလျအသငျးကို တိုကျရိုကျပွောငျးရှခေဲ့တာပါ။ ဟူဂိုဆနျးခကျြဇျဟာ အကျသလကျတီကိုအသငျးမှာ ၁၉၈၁ ကနေ ၁၉၈၅ ခုနှဈအထိ ကစားခဲ့သလို ရီးယဲလျအသငျးအတှကျ ၁၉၈၅ ကနေ ၁၉၉၂ ခုနှဈအထိကစားခဲ့ပွီး နှဈသငျးစလုံးမှာ အောငျမွငျမှုရယူနိုငျခဲ့တယျ။
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျတိုကျစဈမှူးကွီး ရာအူးလျကလညျး သူတို့ရဲ့မွို့ခံပွိုငျဘကျအသငျး လူငယျအကယျဒမီကနေ ထှကျပျေါခဲ့တဲ့ ကစားသမားတဈဦးပါပဲ။ ၁၉၉၂ မှာ ရီးယဲလျအသငျးအကယျဒမီကို ရောကျရှိခဲ့ပွီး အဲဒီကနေ စီနီယာကစားသမားဖွဈလာခဲ့တာပါ။
ရီးယကျဈ José Antonio Reyes
ရီးယကျဈက ၂၀၀၆-၀၇ ရာသီမှာ အာဆငျနယျကနေ ရီးယဲလျအသငျးကို အငှားနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီရာသီကုနျမှာပဲ အကျသလကျတီကိုအသငျးဆီ ရောကျခဲ့တာပါ။ အကျသလကျတီကို ကစားသမားဘ၀ (၄)နှဈတာကာလအတှငျး ယူရိုပါလိဂျ(၂)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၄)ခုအထိ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။
မိုရာတာကလညျး ရာအူးလျလိုပါပဲ။ အကျသလကျတီကို အကယျဒမီမှာ ၂၀၀၅ ကနေ ၂၀၀၇ ခုနှဈအထိကစားခဲ့ပွီး ၂၀၀၈ ခုနှဈမှာ ရီးယဲလျအကယျဒမီကို ရောကျရှိခဲ့တယျ။ မိုရာတာရဲ့ ရီးယဲလျကစားသမားဘဝက မတညျငွိမျခဲ့ဘူး။ စီနီယာအသငျးမှာ ၂၀၁၀ က ၂၀၁၄ ၊ ပွီးတော့ ဂြူဗငျတပျဈ၊ ၂၀၁၆ မှာ ရီးယဲလျဆီ ပွနျရောကျ၊ တဈရာသီအကွာမှာပဲ ခယျြလျဆီးကို ရောကျရှိခဲ့သူဖွဈပါတယျ။
ဒီကစားသမားတှကေ မကျဒရဈမွို့ခံနှဈသငျးစလုံးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားသမားတှထေဲက နာမညျကြျောတှကေို ရှေးထုတျထားတာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှလေညျး ကိုယျသိတဲ့ ကစားသမားနာမညျတှကေို ပွောခဲ့ပေးပါလား . . . . .